Shiinaha Gawaarida Cunnooyinka Soo-saarayaasha Vacuum-qaboojiyeyaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha DHAMMAAN
Moodooyinka Qaboojiyaha Vacuum & Tilmaamaha:
Vacuum meeldhexaadka ah Feature Main
Xawaaraha qabow 1.Fast Cunto karis ah oo la qaboojiyey ilaa 10 ℃ kaliya waxay u baahan tahay 20-30, cuntada la kariyey waxay qaboojisay ilaa 20 ℃ gudaha 10-20min.
Labiska qaboojinta. Marka la eego xaaladda faakiyuumka, cuntada la qaboojiyey min jir ilaa dusha.
Qaboojinta laba-marxaladda ah si loo yareeyo biyo dhaca cuntada. Laga soo bilaabo heerkulka sare ilaa 60 ℃, cuntada si dhakhso leh ayaa loo qaboojin doonaa si looga fogaado bakteeriyada koritaanka degdegga ah, keydinta labaad ayaa gaabin doonta qaboojinta si loo yareeyo uumiga luminta, iyo hagaajinta dhadhanka cuntada.
4.Mashiinka laga sameeyay birta aan xarka lahayn, heerka nadaafadda cuntada iyo mashiinku wuxuu leeyahay muuqaal qurux badan.
Waxtarka 5.High iyo tamar-keydinta. Laba-qaboojiye qaboojiye iyo gaar ahaan bamka giraanta biyaha si loo yareeyo kharashka socda. 6 hawlgal badhan oo hal ah iyo cilladbixinta nidaamka kaabayaasha.
Vacuum meeldhexaadka ah Qaybaha ugu waaweyn
1. Qolka Vacuum - Si aad ugu rarto cuntadaada ka samaysan birta birta ah.
2. Nidaamka hawo-qaadashada - Si hawada looga qaado qolka faakiyuumka, ka dibna cuntada u qaboojiso.
3. Nidaamka qaboojiyaha - In la qabto uumiga biyaha qolkan si loo hubiyo habka qaboojinta ee joogtada ah.
Nidaamka kontoroolka --- Si loo xakameeyo loona muujiyo xaalada shaqo ee qaboojiyaha faakiyuumka.
Vacuum meeldhexaadka ah Codsiga Main
1. Cunto la kariyey: khudradda karsan, boqoshaada, hilibka, hilibka doofaarka, hilibka lo'da, kalluunka, haley iwm.
2. Cunto la dubay: Doolsha bisha, keega, rootiga iwm.
Cunto shiilan: bariis la shiilay, kubad la shiilay, guga iwm.
4.Steam food: Bariis Steam, baastada, qashinka, sushi, kaydinta, rootida uumiga iwm.
5.Stuffing food: bariis qubid, cunno la diyaariyey, moon cake food iwm
Ikhtiyaarrada Kala-baxa ee Vacuum Cunnooyinka Diyaarsanaanta Sare
Ikhtiyaariyada Korantada: a. Hawo qaboojiye hawo qaboojiye b
Ikhtiyaariyada Albaabka: a. Albaabka lulid ee caadiga ah Albaabka Sariirta
3.Qaybaha mishiinka loo habeeyay: a. Mashiinka isku dhafan b. Mashiinka jirka ee kala qaybsan
Fursadaha Qaboojiyaha: a.R404a b.R407c
Hore: Foornada faakiyuumka buskudka
Xiga: Hilibka la kariyey ee Qaboojiyaha